सेयर बजार राताम्मे, होला त अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिको असर ? - Arthatantra.com
काठमाडौ । भारी गिरावटसँगै सेयर बजार राताम्मे भएको छ । सोमबारको कारोबारले बजारमा लगानीकर्ताको २७०० को मनोविज्ञानलाई तोडेको छ ।
बजार राताम्मे बन्दा नेप्से मापन गर्ने सूचक ११४.०२ अंकले घटेर परिसूचक २६९८.२५ बिन्दुमा रोकिएको छ । २२५ कम्पनीको १ करोड ७३ लाख ३० हजार ५३८ कित्ता सेयर ८ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख १ हजार ९ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा भारी गिरवाट आएपनि कारोबार रकम भने सामान्य नै रहेको छ ।
कारोबारमा सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट देखिएको छ । बैंकिङ समूहको ५१.४६, विकास बैंक ३३२.३८, फाइनान्स कम्पनी २२९.६९, जलविद्युत २२०.२९, जीवन बीमा ८००.०६, माइक्रोफाइनान्स १६२.३२, निर्जीबन बीमा समूहको उपसूचक ६१४.२१ अंकले घटेको छ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अभिव्यत्तिको कारण पनि बजारमा गिरावट आएको चर्चा सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आइक्यानको कार्यक्रममा सेयर बजार बजारमा हावा भरिएको र यसको हावा खुस्क्यो भने के हुन्छ ? भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।
जसको असर पनि बजारमा परेको बताइन थालेको छ । मन्त्री शर्माको यो अभिव्यक्ति आएसँगै आलोचना समेत सुरु भएको छ । मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ती बजारको अहितमा भएको जानकारहरुको भनाई छ । यता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कर्जाको सिमाको विषयमा गरेको व्यवस्थाको पनि विरोध भइरहेको छ । यता पछिल्लो समयमा बैंकहरुले बढाएको ब्याजदरको असर पनि सेयर बजारमा देखिएको छ ।
वि.सं.२०७८ असोज ४ सोमवार १५:२६ मा प्रकाशित
News Views: 488
अघिल्लाे आधा दर्जन कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घट्यो, प्रतिकित्ता कुनको कति ?
पछिल्लाे सानिमा लाइफको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट, प्रतिकित्ता कति घट्यो ?